Vaovao - Ahoana no fomba hanamboarana amin'ny fahavaratra izay tsy matavy sy tsy miala!
Hatramin'ny nanombohan'ny fahavaratra, ny aretin'andoha lehibe indrindra toa ahy izay tsy mitsahatra manenjika hatsaran-tarehy dia ny manala ny makiazy amin'ny fahavaratra, indrindra rehefa mafana ny makiazy ary miempo ny makiazy. Rehefa afaka makiazy matotra antsasak'adiny dia mivadika endrika miloko lehibe. Tena marina izany. Mitomany mafy!
Raha jerena ny zava-misy fa fahita ity olana ity ary mitranga amin'ny zazavavy amin'ny karazan-koditra rehetra, dia nanasa manokana androany ireo mpampianatra mpanaingo doko fanta-daza izahay mba hangalatra ny tsiambaratelon'ny makiazy maharitra fahavaratra!
Voalohany indrindra, andao hazavaina ny fanontaniana fototra vitsivitsy:
Fa maninona no esorinao ny makiazy?
Misy antony telo mahatonga antsika hanala ny makiazy: hatsembohana, sebum ary tsy fahampian-drano amin'ny hoditra.
Ny hatsembohana dia zavatra tsy azontsika hialana amin'ny fahavaratra. Rahavavy kely maro ihany koa no nilaza fa raha te haharitra ny makiazy dia misafidy ny hampiasa vokatra makiazy koa izy ireo, toy ny vovo-vovoka, vovoka ary paosy fanosotra, fa tokony esorin'izy ireo ilay makiazy na esorina. Mipetraka aiza ny olana?
Misy fomba an'arivony maro hanamboarana makiazy amin'ny Internet, saingy tsy maintsy fantarinao hoe inona ny karazana hoditrao, ary avy eo mifidiana vokatra sy fomba fametrahana makiazy mety, raha tsy izany dia ho maina sy maina ny hoditra maina ary ny hoditra menaka. hanala haingana ny makiazy!
Ohatra, ny hoditra maina dia tsy mety amin'ny fomba fametrahana sandwich, ampiasao vovoka malalaka fotsiny eo an-toerana ao amin'ny faritra t; ho an'ny hoditra misy menaka, aza mampiasa soson-tsifotra famoahana vovoka malalaka handaminana ny makiazy, fa ny mason-tarehy kosa dia maska ​​vovoka mitsinkafona kokoa!
Fikarakarana hoditra mahafinaritra alohan'ny makiazy
Ny tena faran'ny hoditra dia tsy miandany ary tsy menaka, fa ity karazan-koditra ity dia azo lazaina ho sarotra mivelatra isan'andro isan'andro. Manana hoditra maina, hoditra misy menaka na hoditra mifangaro isika amin'ny ankapobeny.
Ny ampahany lehibe amin'ny sakana amin'ny fidiran'ny hamandoana amin'ny hoditra amin'ny fahavaratra dia satria matevina loatra ny stratum corneum, noho izany dia namafa moramora ny hoditra aho tamin'ny landy vita amin'ny landihazo voadona amin'ny toner taorian'ny nanadiovana azy, ary nakariko teo amin'ny hatoka sy tao aoriany sofina. Misy antony roa amin'izany. Ny voalohany dia ny fanesorana ny vovoka sy ny loto eo amin'ny tarehy, ary ny faharoa kosa dia ny fampitoniana ny hoditra ary hahatonga azy io ho tototry ny fikolokoloana hoditra manaraka.
Aorian'io, tohizo ny fampiharana toner faharoa, ary ho tsara kokoa ny effet moisturizing sosona roa sosona. Zava-dehibe ny fahalalana fa ny ambaratonga rehetra amin'ny mari-pana miakatra amin'ny fahavaratra dia hampitombo ny haben'ny solika amin'ny tarehy amin'ny 20%. Rehefa ampiana rano ampy vao tsy afaka mifandanja be loatra ny fandanjana rano sy menaka.
Satria tsy maintsy asiana «sunscreen» sy makiazy fototra ianao amin'ny fanaraha-maso dia tsy maintsy misafidy fomba mamelombelona sy manalefaka ianao amin'ny vokatra esory sy crème mandritra ny andro. Ny vokatra fanaraha-maso menaka kely no tsara indrindra, raha tsy izany menaka loatra dia hisy fiantraikany amin'ny famolavolana sarimihetsika amin'ny masoandro manaraka amin'ny tarehy. Ny mora makiazy dia tsy mora miraikitra amin'ny hoditra!
1. Safidio ny vokatra makiazy mety
Araka ny voalaza tetsy ambony, ny fomba sy ny vokatra mety amin'ny karazana hoditra samy hafa dia samy hafa, ary mizara roa amin'ny ankapobeny izy ireo: hoditra maina sy hoditra menaka. Ny vokatra napetraka eny an-tsena dia misy vovoka maloto, mofomamy vovoka, fanamboarana sns ...
Ny mofomamy vovoka sy ny vovo-tantely dia miseho amin'ny endrika samihafa. Ny iray vovoka ho an'ny fampiasana ao an-trano, ary ny iray apetaka anaty mofomamy hivoaka. Raha ny marina, ny vovo-dronono vovoka dia ny silika, vovoka talcum, diôdiôida titanium, oksida zinc, sns. Eny, mitroka menaka be loatra amin'ny tarehy izy ireo.
Ny anarana anglisy ny vovoka dia fototra vovoka, izay vokatra fototra vovoka. Azonao atao ny mampiasa azy io ho toy ny makiazy fototra ary tsy mila mampiasa vokatra vovoka hametrahana makiazy aorian'izay!
Betsaka ny fomba fametrahana setroka makiazy. Na firy na firy na firy ny singa esorina ao amin'ilay doka, ny tena fotony dia horonantsary taloha. Ny sarimihetsika taloha dia mamorona sarimihetsika miaro amin'ny tavanao. Tsy hanova ny makiazy amin'ny tarehinao Amin'ny gloss.
Ny tombony azo avy amin'ny famafazana toerana dia ny fahaizany mampihena ny fahatsapana vovoka amin'ny tarehy makiazy ary mahatonga azy io ho voajanahary kokoa. Ny fatiantoka dia tsy ampiana firy na firy ny fifehezana solika ampiana, ny tena vokany dia tsy tsara toa ny vokatry ny fifehezana menaka mofomamy vovoka malemy sy fametrahana makiazy!
Ny famafazana fanamboarana makiazy dia marimarina kokoa ihany koa, toy ny azo afangaro amin'ny fototra mba haharetana sy hamirapiratra ny fototra, ary ny famafazana fametahana makiazy dia azo ampiasaina aorian'ny fomba fanaovan-mofo mba hampalemy ny fahatsapana vovoka. Fa ny hoditra misy menaka y1s1 dia tsy mety amin'ny fametahana tsifotra irery, dia ho menaka kokoa ary mety kokoa amin'ny hoditra maina.
2. Ahoana ny fomba hametrahana makiazy amin'ny karazana hoditra samy hafa
Amin'ny ankapobeny, ny hoditra maina dia tsy mamokatra menaka betsaka amin'ny takolaka, ary mora kokoa ho an'ny faritra T sy ny takolaka ny mamoaka solika sy manala makiazy. Ny mpampianatra Jianxing dia mamporisika ny hampiasa borosy vovoka malefaka ho an'ny makiazy amin'ny ampahany, avy eo aza mikipy ary aza mijery ny teknika!
Atsofohy vovoka mangatsiaka kely ary apetaho moramora amin'ny faritra T, orona, saokany ary ny sisin'ny kontour ivelany.
Satria ny habetsahan'ny menaka vokarin'ny hoditra maina dia somary kely ihany amin'izao fotoana izao, ka esory fotsiny ny vovoka sisa tavela amin'ny borosy. Mampitaha ny tarehy havia sy havanana, mazava ho azy fa hitanao fa ny tarehy havia dia ny vokatry ny makiazy an'ny microdermabrasion, marina tokoa!
Ho an'ny hoditra misy menaka dia asaina mampiasa vovoka maloto + «spray» fanaovana «makeup» hifehezana ny menaka + hitazomana ny makiazy tsy hahomby. Ny mpampianatra Jianxing koa dia misy zavatra holazaina momba ny fampiasana ny «spray spray».
Ny fomba famafazana T sy X fanta-daza dia tsy mety amin'ny fametahana paosin-tarehy. Tsy toy ny spray an'ny Avène ampiasaintsika, izay tankina entona, ny hery famafazana dia manana faritra somary matanjaka. Jianxing dia manolo-kevitra ny hampiasa sehatra telo ho an'ny makiazy.
3.Amaingo mety hahitatra ny fotoana iaretana
Na dia efa nandany fotoana be dia be tamin'ny makiazy na makiazy fototra aza isika, dia tsy misy fomba hanesorana tsy an-kijanona ny makiazy amin'ny hafanana ambony. Ny famenoana makiazy dia nanjary safidy ilaina hanitarana ny fotoana fiandrasana.
Nanangona fanontaniana be dia be avy amin'ny rahavavy koa izahay. Amin'ny ankapobeny, arakaraky ny hikasanao ny makiazy no vao mainka mavesatra ny makiazy. Ny makiazy aorian'ny makiazy dia hihosotra menaka ary hanala haingana ny makiazy. Ka inona ny olana?
Ny dingana voalohany amin'ny fampiharana makiazy ivelany dia ny fitrohana ny menaka be loatra amin'ny tarehy alohan'ny hametrahana makiazy. Firy ny olona tsy nanao an'ity dingana ity, azafady atsangano ny tananao, raha tsy izany dia voajanahary ny vovoka hiforitra mivantana amin'ny tarehy matavy, ary haharitra ela izany. Tena mampatahotra ny makiazy isaky ny mandeha!
Fa raha ny tena marina dia manahirana tokoa ny mitondra tavy mitroka solika rehefa mivoaka. Nampianatra ahy tetika fampiasa ny mpampianatra hikitika ny makiazy ivelany.
Esory aloha ny lamba famaohana taratasy iray ary sokafy, aforeto amin'ny diagonaly sy diagonaly izy mba hanoloana ilay taratasy mifoka, ary avy eo tsindrio mba hakana ilay menaka. Amin'ny zoro aseho amin'ity sary manaraka ity dia tsindrio ny takolaka, orona ary faritra T hanalana menaka be loatra.
Tsindrio hamboarina ny handrina sy ny saokanao, tsindrio ny tarehy amin'ny rantsan-tànana, ary avadiho ny ilan'ny tarehy iray hafa ary ampiasao ny tavy amin'ny ilany hafa.
Ny faritra voadona mafy indrindra rehefa manala ny makiazy ianao rehefa manala ny oronao, ankoatry ny fiarahan'ny elatra, ny orona koa dia ampahany amin'ny orona manangona mamirapiratra menaka. Aza adino!
Rehefa avy nokaoka ny menaka dia natoraly ny nametrahana ny vovo-tany, ary nomen'Andriamatoa Jianxing teknika fikitika manokana azy ihany koa. Raha mampiasa ny puff puff ianao raha hikasika makiazy dia ho be loatra ny habaky ny vovo-dronono, izay mety hahatonga ny makiazy hahatsapa ho mavesatra loatra, ary loza izany eo amin'ny fanalavirana ny fiaraha-monina!
Atsofohy amin'ny fomba mihodina ny vovo-vovoka ary kosohy moramora amin'ny faritra faran'izay mafy indrindra amin'ny makiazy, mba ho marimarina kokoa ny makiazy fa tsy vovoka be loatra!
Ho an'ny takolaka dia esory fotsiny ny vovoka sisa tavela aorian'ny fikasihana eo aloha, mba tsy ho mavesatra sy maivana ary voajanahary kokoa ny fikasihana!
lipgloss, kapoka mink, Volomaso maso, Fanitarana volomaso, Mpivarotra volomaso, eyeliner,